यी हुन एकदिवसीय क्रिकेटमा दोहोरो सतक बनाउने ६ खेलाडी
६ जेठ, काठमाडौँ । एकदिवसीय क्रिकेटमा दोहोरो सतक बनाउने खेलाडीहरुको नाम यसप्रकारको रहेको छ :
भारतीय क्रिकेट टिमका उपकप्तान रोहित शर्माले एकदिवसीय क्रिकेटमा सर्वाधिक पटक दोहोरो सतक बनाएका छन । उनले एकदिवसीय क्रिकेटमा मात्र ३ दोहोरो सतक बनाएका छन । उनले आफ्नो पहिलो दोहोरो सतक २०१३ मा अष्ट्रेलिया विरुद्ध बनाएका थिए । उनले त्यस खेलमा २०९ रन बनाएका थिए । दास्रो दोहोरो सतक भने उनले २०१४ मा श्रींलका विरुद्ध बनाएका थिए । त्यस खेलमा उनले २६४ रन बनाएका थिए । रोहितले तेस्रो दोहोरो सतक २०१७ मा श्रींलका विरुद्ध बनाए । उनले त्यस खेलमा २०८ रन बनाएका थिए ।
२. सचिन तेन्दुलकर
भारतीय क्रिकेट टिमका पुर्वखेलाडी सचिन तेन्दुलकरले एकदिवसीय क्रिकेट पहिलो पटक दोहोरो सतक बनाएका थिए । उनले २०१० मा दक्षिण अफ्रिका विरुद्धको खेलमा पहिलो पटक एकदिवसीय क्रिकेटमा सतक बनाएका थिए । उनले त्यस खेलमा २०० रन बनाएका थिए ।
३. विरेन्द्र शेहवाग
भारतीय क्रिकेट टिमका पुर्वखेलाडी विरेन्द्र शेहवागले एकदिवसीय क्रिकेटमा दोस्रो दोहोरो सतक बनाएका थिए । उनले २०११ मा वेस्टइंडिज विरुद्ध खेलमा दोहोरो सतक बनाएका थिए । उनले त्यस खेलमा २१९ रन बनाएका थिए ।
४. क्रिस गेल
वेस्टइंडिज क्रिकेट टिमका विस्फोट खेलाडी क्रिस गेलले पनि एकदिवसीय क्रिकेटमा दोहोरो सतक बनाएका छन । उनले २०१५ मा जिम्बावे विरुद्धको खेलमा दोहोरो सतक बनाएका थिए । त्यस खेलमा उनले २१५ रन बनाएका थिए ।
५. मार्टिन गप्टिल
न्युजिल्याण्ड क्रिकेट टिमका ओपनर मार्टिन गप्टिलले पनि एकदिवसीय क्रिकेटमा दोहोरो सतक बनाएका छन । उनले २०१५ मा वेस्टइंडिज विरुद्धको खेलमा दोहोरो सतक बनाएका थिए । त्यस खेलमा उनले २३७ रन बनाएका थिए ।
६. फखर जमान
पाकिस्तान क्रिकेट टिमका ओपनर फखर जमानले पनि एकदिवसीय क्रिकेटमा दोहोरो सतक बनाएका छन । उनले २०१८ मा जिम्बावे विरुद्धको खेलमा दोहोरो सतक बनाएका थिए । त्यस खेलमा उनले २१० रन बनाएका थिए ।
१७ जेठ, पोखरा । कोभिड–१९ सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि…
यी हुन भारतका लागि टि-२० अन्तराष्ट्रिय क्रिकेटमा सबै भन्दा छिटो अर्धसतक बनाउने ३ खेलाडी
डेब्यु खेलमै ह्याट्रिक लिने श्रींलकाका खेलाडीलाई लगाइयो सबै खाले क्रिकेट खेलबाट प्रतिबन्ध